China super ezingcakacileyo yendalo khazi ilitye khazi mveliso kunye nabenzi | I-DFL
Umzekelo No .: DFL-014ZPB (T)
Umzekelo No .:I-DFL-014ZPB (T)
I-beige yendalo entle Ukufakwa kwamatyeinobuncwane bokuthungwa kunye nombala obongeza ukuqaqamba okungaphelelwa lixesha kuyo nayiphi na indawo yangaphakathi okanye yangaphandle. Ukuqinisekisa ukomelela kunye nokusebenza ngokuchaseneyo, iimveliso zamatye endalo zinokusetyenziselwa ukwenza ukujonga okuhlangeneyo kwesitayile esihlala sikho. DFLstoneIiphaneli zamatye zihambelane nezi mpawu zilandelayo:
Iikhathalo zomthi Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Zonke iiNdawo zokuKhanya kuDonga ziqinisekisiwe ngomgangatho. I-China Imvelaphi yeFektri yokuKhonkxa kweLitye. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ngwevu yesileyiti yendalo yentsika
Rusty Natural Slate Stone Imithetho
Imibala yeMarble yendalo yeMarble kaMoses
Ingaphandle leNdonga yeGrey Quarzite yePhaneli yaMatye